वीरमा अनियमितताकाे पराकाष्ठाः निर्देशककाे मासिक खाजा खर्च चार लाख ६९ हजार – Hotpati Media
वीरमा अनियमितताकाे पराकाष्ठाः निर्देशककाे मासिक खाजा खर्च चार लाख ६९ हजार
१६ आश्विन २०७६, बिहीबार ०७:०९ मा प्रकाशित (8 महिना अघि) अनुमानित पढ्ने समय : २ मिनेट
काठमाडाैं-वीर अस्पतालका निर्देशक डा. केदार सेञ्चुरीले एक महिनाम पाँच लाख रुपैयाँबराबरको खाजा खाएको बिल पेस गरेका छन्।
२०७६ असारमा अस्पताल प्रशासनले बनाएको बिलमा वीरका निर्देशक सेञ्चुरीले चार लाख ६९ हजार तीन सय रुपैयाँ खाजामा खर्च गरेको देखिन्छ। बिलको सदर सेञ्चुरी स्वयंले गरेका छन्।
‘वीर अस्तपाल वरिपरि क्याफे हुँदाहुँदै माइतीघर किन जानुपर्यो। त्यसमा पनि अस्पतालभित्रै क्यान्टिन छ। त्यसैले माइतीघरको क्याफेबाट तयार गरेको बिल नक्कली हुन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘अस्पताल प्रशासनले तयार गरेका केही बिलमा सार्वजनिक बिदाका दिन पनि खाजा खर्च भएको देखाइएको छ।’
यस विषयमा डा. सेञ्चुरीसँग जिज्ञासा राख्दा उनले केही ‘बदमास’ ले आफूविरुद्ध गलत प्रचार गरेको बताए। ‘अनियमिता भएकै छैन,’ उनले भने, ‘केही बदमासले गलत प्रचार गरिरहेका छन्।’